Usuku Lokukhishwa Kwezipoki ze-Morgan City Isizini 2: I-Cast, Isakhiwo, Nezibuyekezo! - Ukuzijabulisa
Usuku Lokukhishwa Kwezipoki ze-Morgan City Isizini 2: I-Cast, Isakhiwo, Nezibuyekezo!
Ubani Osemdlalweni Wezipoki waseMorgan City?
Yini i-Storey ngemuva kweMorgan City Ghosts?
Izodlala nini iSizini Yesibili Yezipoki yaseMorgan City?
Idokhumentari'Izipoki zaseMorgan City'kulandela ithimba labaphenyi abangajwayelekile njengoba liphenya imibiko yezigameko ezenzeka eMorgan City, eLouisiana. Idethi yokusakaza yalokhu kulandelelwa kwe-‘Ghosts Of Shepherdstown’ ye-Travel Channel isethelwe uMeyi 2019. I-Executive ekhiqizwe ngu-Mark Kadin, Will Ehbrecht, Tucia Lyman, kanye no-Elaine White, ikhiqizwa yi-MAK Pictures.
U-Ben Hansen, u-Jereme Leonard, no-Sarah Lemos bangamalungu omdlalo wezinkanyezi. U-Hansen uvele ku-‘Iqiniso noma Okungelona iqiniso: Amafayela AseParanormal’, ‘Paranormal Lockdown’, kanye ne-‘Ghosts Of Shepherdstown’, phakathi kweminye imidlalo yethelevishini. Uyi-ejenti yangaphambili ye-FBI enamakhono amahle kakhulu okuphenya. Waziwa njengodokotela wamademoni, uLeonard usevele kumaphodikasti amaningi. ULemos, isangoma eqenjini, uqedela abathathu. Kuze kube manje, usevele ku-Banner Travel's Ghost Hunter Cruise eSalem, e-Oregon, lapho edabuka khona.
Isazi-mlando sendawo kanye nomgcini-mlando u-Diane Wiltz, iNhloko yamaPhoyisa e-Morgan City u-James Blair, kanye neMeya uGrizzaffi, oqapha yonke inqubo, bonke bahamba nabo.
Isikhulu samaphoyisa uJames Bo Blair waseMorgan City, eLouisiana, uzimisele ngokufinyelela ekugcineni ochungechungeni lwezigameko ezingajwayelekile kanye nokwanda kwezingcingo eziphuthumayo ezihambisana nezimo ezingavamile. Uthola ukuxhumana noShepherdstown, eWest Virginia, iNhloko yamaPhoyisa uMike King, oke wabhekana nesimo esifanayo esikhathini esidlule. UBlair ucela usizo lukaJereme Leonard, uBen Hansen, noSarah Lemos ngemva kokukhuluma naye. Kubo bobathathu ukuthola ukuthi kwenzakalani lapha.
Kuso sonke isiqephu, silandela amalungu njengoba ephenya izehlakalo ezixakile ezenzeka eMorgan City nasezindaweni ezizungezile. Babheka amaphethini afanayo kanye nezinkomba ezikhomba isisombululo. Abacwaningi bathola ukuthi lezi zigameko azigcini nje ngeMorgan City kodwa zenzeka ngaphesheya kwe-St. Mary Parish.
Lapho owesifazane ethi ubone idlozi ngenkathi eshayela endaweni enokuhwamuka ezungeze iLake Palourde, itulo lala madokodo liyanyakaza. Ngemuva kokwaziswa yiziphathimandla, ithimba livele ligijime liyobheka lesi sigameko.
Imidlalo yokuzingela izipoki, efana ne-Ghost Adventures, yaziwa ngezindaba zayo ezivaliwe, futhi lena iyafana. Inkungu engaqondakali ibonakala iphethe into engenabuntu esiqeshini sokuqala salolu chungechunge. Ukuthi ihlinzeka ngesixazululo esiqondile kuncike ngokuphelele kusibukeli.
Ukulingiswa kabusha kokuhlangana kwezipoki kuhambisana nokungabaza kwesiqephu ngasinye. Phakathi, ochwepheshe abavela emikhakheni eyahlukene beza ngaphambili bazochaza lezi zenzakalo ezihlukahlukene kanye nezimbangela zazo ezingase zibe khona.
Ukulandisa okungokomlando nophenyo nakho kuyasetshenziswa embukisweni ukuze uwenze inhlanganisela yokugcina yezimfihlakalo zokubulala, ukuhlangana okungavamile kanye namasu e-CSI ophenyo.
U-Diane Wiltz, isazi-mlando sendawo, uveza amaphuzu athile athakazelisayo encwadini yakhe, Izipoki zaseMorgan City, ehlola umlando wedolobha onezinkathazo. Isibonelo, isipoki sika-Ada LeBoeuf, owesifazane wokuqala owalengiswa eLouisiana ngo-1927, kukholakala ukuthi sihlukumeza inkungu.
Uphenyo olwengeziwe luholela abaseshi ukuba bakhulume nomzukulu wakhe wendodakazi, onikeza amanye amasu ambalwa. Ithimba libe seliqhuba izivivinyo zokubheka noma yiziphi izinkomba zesenzo esingavamile ngokusetshenziswa kobuchwepheshe. Le noveli iphetha ngokuhlanekezela ngecala lokubulala lika-Ada, futhi umndeni wakhe uyakwazi ukukwamukela ukufa kwakhe.
Njengoba uphenyo seluya ngasemaphethelweni, siqala ukuthola izingcingo ezengeziwe ezivela ezindaweni ezingaphandle kweMorgan City. Ngenxa yalokhu, ithimba liyaphoqeleka ukuthi lihambe isifunda lonke lifuna ulwazi. Ngesikhathi seMpi Yombango yaseMelika, indawo yaseLouisiana yayiyindawo yempi ye-voodoo enegazi.
Kukhona ikhaya lomndeni elinezigebengu elihlala umphefumulo wentombazanyana futhi laba abathathu abaxhumana nabo. Ukuze kuqedwe lokhu kudonsana kwezipoki, izisebenzi kufanele zihlole ezinqolobaneni zomlando futhi bathole izinkomba eziyinkathazo isinyathelo esisodwa ngesikhathi.
Okokugcina, uma unquma ukunikeza lo mbukiso isithombe, ungawubukeli nje ngenxa yesimo esiyinqaba; uzophinde ufunde okuningi mayelana namasiko e-Cajun, umlando, nezinye izindawo ezinhle kakhulu endleleni.
Funda kabanzi: Abafana Isizini 3: Idethi Yokukhishwa Elindelwe Nezibuyekezo!
Isizini yokuqala ye'Izipoki zaseMorgan City'yaqala ku-Travel Channel ngoLwesihlanu, Juni 21. Sekukonke, kunezingxenye eziyisishiyagalombili, ngayinye ewashi ngemizuzu engama-60 ubude.
Izodlala isikhathi esingakanani i-‘Ghosts of Morgan City’? Ukuvakasha akukenzi isimemezelo esisemthethweni, ngakho-ke kusesekuseni kakhulu ukwenza izibikezelo eziqinile. Ngeke simangale uma ithathwa isizini yesibili, uma kubhekwa umbono othakazelisayo wohlelo.
'Izipoki zaseMorgan City' Isizini 2 ingase iphume ngoJuni 2020 uma lokho kwenzeka. Njengoba ulwazi olusha lutholakala, sizoqiniseka ukuthi siyengeza kulesi sigaba.
Ithini Inguqulo Eyengeziwe Eyisishiyagalombili Enenzondo?
I-Hotel Life a I-Resort Simulator: Ukukhishwa Okusemthethweni, Umdlalo Wegeyimu, Amakhono, Nolunye Ulwazi Oluningi!